February 2018 | Language Century Language Century
10:01 PM C-Sentence , Chinese
တစ်ယောက်အကြောင်း တစ်ယောက်မေးမြန်းကြတဲ့အခါမှာ ပြောလေ့ရှိတဲ့ပုံစံလေးမို့ သိထားသင့်ပါတယ်။
(conj) 跟 gēn
ကဲင်း - နဲ့။ နှင့်။ နှင့်အတူ
(v) 有 yǒu
ယို - မှာရှိသည်
(n) 关系 guān xi
ကွမ်းရှိ - ဆက်စပ်မှု။ တော်စပ်မှု
Nǐ gēn tā yǒu shénme guānxi?
နီကဲင်းထား ယို ရှဲhမဲာ့ကွမ်းရှိ
Nǐmen liǎ yǒu shénme guānxi?
နီမဲင်းလျာ ယို ရှဲhမဲာ့ကွမ်းရှိ
တဈယောကျအကွောငျး တဈယောကျမေးမွနျးကွတဲ့အခါမှာ ပွောလရှေိ့တဲ့ပုံစံလေးမို့ သိထားသငျ့ပါတယျ။
ကဲငျး - နဲ့။ နှငျ့။ နှငျ့အတူ
ယို - မှာရှိသညျ
ကှမျးရှိ - ဆကျစပျမှု။ တျောစပျမှု
နီကဲငျးထား ယို ရှဲhမဲာ့ကှမျးရှိ
နီမဲငျးလြာ ယို ရှဲhမဲာ့ကှမျးရှိ
တင်ပူရကို တရုတ်လို ဘယ်လိုခေါ်လဲ။
9:21 PM C-Word , Chinese
တင်ပူရဆိုတာ ဂျပန်တွေ စားလေ့ရှိတဲ့ သွားရေစာတစ်မျိုးပါ။
Chinese - 天妇罗 tiān fù luó
Japanese - てんぷら tenpura
ဂျပန်အစားအစာ てんぷら ကို တရုတ်လို 天妇罗 tiān fù luó လို့ ခေါ်ပါတယ်။ Latin ဘာသာနဲ့ ad tempora quadragesimae လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ၁၆ ရာစုမှာ ပေါ်တူဂီ ခရစ်ယာန် သာသနာပြုတွေဟာ ဂျပန်ကို ရောက်ရှိလာတာကနေ စတင်ပျံ့နှံ့ခဲ့တဲ့ အစားအစာတစ်မျိုးပါ။
တငျပူရကို တရုတျလို ဘယျလိုချေါလဲ။
တငျပူရဆိုတာ ဂပြနျတှေ စားလရှေိ့တဲ့ သှားရစောတဈမြိုးပါ။
ဂပြနျအစားအစာ てんぷら ကို တရုတျလို 天妇罗 tiān fù luó လို့ ချေါပါတယျ။ Latin ဘာသာနဲ့ ad tempora quadragesimae လို့ ချေါပါတယျ။ ၁၆ ရာစုမှာ ပျေါတူဂီ ခရဈယာနျ သာသနာပွုတှဟော ဂပြနျကို ရောကျရှိလာတာကနေ စတငျပြံ့နှံ့ခဲ့တဲ့ အစားအစာတဈမြိုးပါ။
HSK Level 1 မေးခွန်းနမူနာ။
8:34 PM C-ebook , Chinese
တရုတ်ဘာသာ အရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲ HSK Level 1 ဖြေဆိုလိုသူများအတွက်ပါ။
ဖြေမယ်စိတ်ကူးထားသူများအတွက် HSK 1 မှာ ပါဝင်တဲ့ ဝေါဟာရများ၊ မေးခွန်းနမူနာနဲ့ အသံဖိုင်တွေကို ဒေါင်းဖို့ Link တွေ ချိတ်ပေးထားပါတယ်။
♥ HSK 1 မေးခွန်းနမူနာ
★ Download Link https://goo.gl/fsK3sY
♥ HSK 1 ဝေါဟာရများ
★ Download Link https://goo.gl/X7RSeP
♥ HSK 1
✔ MP3 Audio File
★ Download Link https://goo.gl/PLkfzE
HSK Level 1 မေးခှနျးနမူနာ။
တရုတျဘာသာ အရညျအခငျြးစဈစာမေးပှဲ HSK Level 1 ဖွဆေိုလိုသူမြားအတှကျပါ။
ဖွမေယျစိတျကူးထားသူမြားအတှကျ HSK 1 မှာ ပါဝငျတဲ့ ဝေါဟာရမြား၊ မေးခှနျးနမူနာနဲ့ အသံဖိုငျတှကေို ဒေါငျးဖို့ Link တှေ ခြိတျပေးထားပါတယျ။
♥ HSK 1 မေးခှနျးနမူနာ
♥ HSK 1 ဝေါဟာရမြား
HSK Level2မေးခွန်းနမူနာ။
8:30 PM C-ebook , Chinese
တရုတ်ဘာသာ အရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲ HSK Level2ဖြေဆိုလိုသူများအတွက်ပါ။
ဖြေမယ်စိတ်ကူးထားသူများအတွက် HSK2မှာ ပါဝင်တဲ့ ဝေါဟာရများ၊ မေးခွန်းနမူနာနဲ့ အသံဖိုင်တွေကို ဒေါင်းဖို့ Link တွေ ချိတ်ပေးထားပါတယ်။
♥ HSK2မေးခွန်းနမူနာ
★ Download Link https://goo.gl/c6Nv4Q
♥ HSK2ဝေါဟာရများ
★ Download Link https://goo.gl/LqDb7g
♥ HSK 2
★ Download Link https://goo.gl/SMm1ku
HSK Level2မေးခှနျးနမူနာ။
တရုတျဘာသာ အရညျအခငျြးစဈစာမေးပှဲ HSK Level2ဖွဆေိုလိုသူမြားအတှကျပါ။
ဖွမေယျစိတျကူးထားသူမြားအတှကျ HSK2မှာ ပါဝငျတဲ့ ဝေါဟာရမြား၊ မေးခှနျးနမူနာနဲ့ အသံဖိုငျတှကေို ဒေါငျးဖို့ Link တှေ ခြိတျပေးထားပါတယျ။
♥ HSK2မေးခှနျးနမူနာ
♥ HSK2ဝေါဟာရမြား
HSK Level3မေးခွန်းနမူနာ။
8:24 PM C-ebook , Chinese
တရုတ်ဘာသာ အရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲ HSK Level3ဖြေဆိုလိုသူများအတွက်ပါ။
ဖြေမယ်စိတ်ကူးထားသူများအတွက် HSK3မှာ ပါဝင်တဲ့ ဝေါဟာရများ၊ မေးခွန်းနမူနာနဲ့ အသံဖိုင်တွေကို ဒေါင်းဖို့ Link တွေ ချိတ်ပေးထားပါတယ်။
♥ HSK3မေးခွန်းနမူနာ
★ Download Link https://goo.gl/KK3GbS
♥ HSK3ဝေါဟာရများ
★ Download Link https://goo.gl/RA3K6o
♥ HSK 3
★ Download Link https://goo.gl/JdQLLJ
HSK Level3မေးခှနျးနမူနာ။
တရုတျဘာသာ အရညျအခငျြးစဈစာမေးပှဲ HSK Level3ဖွဆေိုလိုသူမြားအတှကျပါ။
ဖွမေယျစိတျကူးထားသူမြားအတှကျ HSK3မှာ ပါဝငျတဲ့ ဝေါဟာရမြား၊ မေးခှနျးနမူနာနဲ့ အသံဖိုငျတှကေို ဒေါငျးဖို့ Link တှေ ခြိတျပေးထားပါတယျ။
♥ HSK3မေးခှနျးနမူနာ
♥ HSK3ဝေါဟာရမြား
HSK Level4မေးခွန်းနမူနာ။
8:18 PM C-ebook , Chinese
တရုတ်ဘာသာ အရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲ HSK Level4ဖြေဆိုလိုသူများအတွက်ပါ။
ဖြေမယ်စိတ်ကူးထားသူများအတွက် HSK4မှာ ပါဝင်တဲ့ ဝေါဟာရများ၊ မေးခွန်းနမူနာနဲ့ အသံဖိုင်တွေကို ဒေါင်းဖို့ Link တွေ ချိတ်ပေးထားပါတယ်။
♥ HSK4မေးခွန်းနမူနာ
★ Download Link https://goo.gl/esPP7u
♥ HSK4ဝေါဟာရများ
★ Download Link https://goo.gl/NCg7Ny
♥ HSK 4
★ Download Link https://goo.gl/fsCKTz
HSK Level4မေးခှနျးနမူနာ။
တရုတျဘာသာ အရညျအခငျြးစဈစာမေးပှဲ HSK Level4ဖွဆေိုလိုသူမြားအတှကျပါ။
ဖွမေယျစိတျကူးထားသူမြားအတှကျ HSK4မှာ ပါဝငျတဲ့ ဝေါဟာရမြား၊ မေးခှနျးနမူနာနဲ့ အသံဖိုငျတှကေို ဒေါငျးဖို့ Link တှေ ခြိတျပေးထားပါတယျ။
♥ HSK4မေးခှနျးနမူနာ
♥ HSK4ဝေါဟာရမြား
HSK Level5မေးခွန်းနမူနာ။
8:14 PM C-ebook , Chinese
တရုတ်ဘာသာ အရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲ HSK Level5ဖြေဆိုလိုသူများအတွက်ပါ။
ဖြေမယ်စိတ်ကူးထားသူများအတွက် HSK5မှာ ပါဝင်တဲ့ ဝေါဟာရများ၊ မေးခွန်းနမူနာနဲ့ အသံဖိုင်တွေကို ဒေါင်းဖို့ Link တွေ ချိတ်ပေးထားပါတယ်။
♥ HSK5မေးခွန်းနမူနာ
★ Download Link https://goo.gl/XbSKbS
♥ HSK5ဝေါဟာရများ
★ Download Link https://goo.gl/KDFcTz
♥ HSK 5
★ Download Link https://goo.gl/9KmZzP
HSK Level5မေးခှနျးနမူနာ။
တရုတျဘာသာ အရညျအခငျြးစဈစာမေးပှဲ HSK Level5ဖွဆေိုလိုသူမြားအတှကျပါ။
ဖွမေယျစိတျကူးထားသူမြားအတှကျ HSK5မှာ ပါဝငျတဲ့ ဝေါဟာရမြား၊ မေးခှနျးနမူနာနဲ့ အသံဖိုငျတှကေို ဒေါငျးဖို့ Link တှေ ခြိတျပေးထားပါတယျ။
♥ HSK5မေးခှနျးနမူနာ
♥ HSK5ဝေါဟာရမြား
HSK Level6မေးခွန်းနမူနာ။
7:45 PM C-ebook , Chinese
တရုတ်ဘာသာ အရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲ HSK ရဲ့ အမြင့်ဆုံး Level ကတော့ level6ပါ။
ဖြေမယ်စိတ်ကူးထားသူများအတွက် HSK6မှာ ပါဝင်တဲ့ ဝေါဟာရများ၊ မေးခွန်းနမူနာနဲ့ အသံဖိုင်တွေကို ဒေါင်းဖို့ Link တွေ ချိတ်ပေးထားပါတယ်။
♥ HSK6မေးခွန်းနမူနာ
★ Download Link https://goo.gl/4vWQef
♥ HSK6ဝေါဟာရများ
★ Download Link https://goo.gl/mJYiiW
♥ HSK 6
✔ Audio File
★ Download Link https://goo.gl/DEzvke
HSK Level6မေးခှနျးနမူနာ။
တရုတျဘာသာ အရညျအခငျြးစဈစာမေးပှဲ HSK ရဲ့ အမွငျ့ဆုံး Level ကတော့ level6ပါ။
ဖွမေယျစိတျကူးထားသူမြားအတှကျ HSK6မှာ ပါဝငျတဲ့ ဝေါဟာရမြား၊ မေးခှနျးနမူနာနဲ့ အသံဖိုငျတှကေို ဒေါငျးဖို့ Link တှေ ခြိတျပေးထားပါတယျ။
♥ HSK6မေးခှနျးနမူနာ
♥ HSK6ဝေါဟာရမြား
2:36 AM C-Album , Chinese
စားသောက်ဆိုင်တွေမှာ ရောင်းချပေးနေတဲ့ ဂုံး၊ ခရုတွေရဲ့ တရုတ်လို အခေါ်အဝေါ်တွေကို ပုံနဲ့တကွ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
မြန်မာလိုတော့ မခေါ်တတ်ဘူးဗျ။ အဆင်ပြေသလိုသာ မှတ်ထားကြပေါ့နော။
စားသောကျဆိုငျတှမှော ရောငျးခပြေးနတေဲ့ ဂုံး၊ ခရုတှရေဲ့ တရုတျလို အချေါအဝျေါတှကေို ပုံနဲ့တကှ ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
မွနျမာလိုတော့ မချေါတတျဘူးဗြ။ အဆငျပွသေလိုသာ မှတျထားကွပေါ့နော။
မျိုးပြစကားလုံး 'လုံး' ။
2:00 AM C-Word , Chinese
မြန်မာစကားမှာ လုံး ဆိုတဲ့ မျိုးပြစကားလုံးက ပစ္စည်းတော်တော်များများအတွက် ရည်ညွှန်းနိုင်ပါတယ်။ တရုတ်လိုတော့ အောက်မှာ စုစည်းဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
一张桌子 yì zhāng zhuō zi
ယိကျန်းh(င်)ကျောhဇစ်z - စားပွဲ တစ်လုံး
一张床 yì zhāng chuáng
ယိကျန်းh(င်)ချွမ်h(င်) - ကုတင် တစ်လုံး
ယိပါးယီဇစ်z - ကုလားထိုင် တစ်လုံး
一只柜子 yì zhī guì zi
ယိကျီးhကွေ့ဇစ်z - ဘီရို တစ်လုံး
一只箱子 yì zhī xiāng zi
ယိကျီးhရှမ်း(င်)ဇစ်z - သေတ္တာ တစ်လုံး
一顶帽子 yì dǐng mào zi
ယိတင်(င်)မောက်ဇစ်z - ဦးထုပ် တစ်လုံး
一顶蚊帐 yì dǐng wén zhàng
ယိတင်(င်)ဝဲင်ဇစ်z - ခြင်ထောင် တစ်လုံး
一个枕头 yí ge zhěn tóu
ယီကဲာ့ကျဲင်hထို - ခေါင်းအုံး တစ်လုံး
一个抱枕 yí ge bào zhěn
ယီကဲာ့ပေါက်ကျဲင်h - ဖက်လုံး တစ်လုံး
一个苹果 yí ge píng guǒ
ယီကဲာ့ဖျင်း(င်)ကော် - ပန်းသီး တစ်လုံး
一个西瓜 yí ge xī guā
ယီကဲာ့ရှီးကွား - ဖရဲသီး တစ်လုံး
一条香蕉 yì tiáo xiāng jiāo
ယိထျောင်ရှမ်း(င်)ကျောင်း - ငှက်ပျောသီး တစ်လုံး
一条黄瓜 yì tiáo huáng guā
ယိထျောင်းဟွမ်(င်)ကွား - သခွားသီး တစ်လုံး
一个包子 yí ge bāo zi
ယီကဲာ့ပေါင်းဇစ်z - ပေါက်စီ တစ်လုံး
一粒鸡蛋 yí lì jī dàn
ယီလိကျီးတန့် - ကြက်ဥ တစ်လုံး
一粒药丸 yí lì yào wán
ယီလိယောက်ဝမ် - ဆေးလုံး တစ်လုံး
一座山 yí zuò shān
ယီဇော့zရှန်းh - တောင် တစ်လုံး
一座楼 yí zuò lóu
ယီဇော့zလို - တိုက် တစ်လုံး
一个家 yí ge jiā
ယီကဲာ့ကျား - အိမ် တစ်လုံး
一颗星 yì kē xīng
ယိခဲယ်းရှင်း(င်) - ကြယ် တစ်လုံး
一颗钻石 yì kē zuàn shí
ယိခဲယ်းဇွမ့်zရှီh - စိန် တစ်လုံး
一颗糖果 yì kē táng guǒ
ယိခဲယ်းထန်း(င်)ကော် - သကြားလုံး တစ်လုံး
一块手表 yí kuài shǒu biǎo
ယီခွိုက်ရှိုးhပြောင် - နာရီ တစ်လုံး
一块石头 yí kuài shí tou
ယီခွိုက်ရှီးhထို - ကျောက်ခဲ တစ်လုံး
一台收音机 yì tái shōu yīn jī
ယိထိုင်ရှိုးhယင်းကျီး - ရေဒီယို တစ်လုံး
一台电脑 yì tái diàn nǎo
ယိထိုင်တျန့်နောင် - ကွန်ပျူတာ တစ်လုံး
一台电视机 yì tái diàn shì jī
ယိထိုင်တျန့်ရှစ်hကျီး - တီဗီ တစ်လုံး
一部手机 yí bù shǒu jī
ယီပုရှိုhကျီး - ဟန်းဖုန်း တစ်လုံး
一架机器 yí jià jī qì
ယီကျာ့ကျီးချိ - စက် တစ်လုံး
一个锅 yí ge guō
ယီကဲာ့ကော - အိုး တစ်လုံး
一只茶杯 yì zhī chá bēi
ယိကျီးhချာhပေး - လက်ဘက်ရည်ပန်းကန်လုံး တစ်လုံး
ယိပါချားhဟူ - လက်ဘက်ရည်ကရား တစ်လုံး
一只碗 yì zhī wǎn
ယိကျီးhဝမ် - ပန်းကန်လုံး တစ်လုံး
一个钵 yí ge bō
ယီကဲာ့ပေါ - သပိတ် တစ်လုံး
一只瓶子 yì zhī píng zi
ယိကျီးhဖျင်(င်)ဇစ်z - ပုလင်း တစ်လုံး
一只眼睛 yì zhī yǎn jing
ယိကျီးhယန်ကျင်း(င်) - မျက်လုံး တစ်လုံး
一盏灯 yì zhǎn dēng
ယိကျန်တဲင်း(င်) - မီးလုံး တစ်လုံး
一节电池 yì jié diàn chǐ
ယိကျယ်တျန့်ချီh - ဓာတ်ခဲ တစ်လုံး
一个袋子 yí ge dài zi
ယီကဲာ့တိုက်ဇစ်z - အိတ် တစ်လုံး
一个背包 yí ge bèi bāo
ယီကဲာ့ပေ့ပေါင်း - ကျောပိုးအိတ် တစ်လုံး
一个镙丝 yí ge luó sī
ယီကဲာ့လော်စီး - မူလီ တစ်လုံး
一粒扣子 yí lì kòu zi
ယီလိခို့ဇစ်z - ကြယ်သီး တစ်လုံး
一枚核弹 yì méi hé dàn
ယိမေးဟဲယ်တန့် - နျူကလိယားဗုံး တစ်လုံး
မြိုးပွစကားလုံး လုံး ။
မွနျမာစကားမှာ လုံး ဆိုတဲ့ မြိုးပွစကားလုံးက ပစ်စညျးတျောတျောမြားမြားအတှကျ ရညျညှနျးနိုငျပါတယျ။ တရုတျလိုတော့ အောကျမှာ စုစညျးဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
ယိကနျြးh(ငျ)ကြောhဇဈz - စားပှဲ တဈလုံး
ယိကနျြးh(ငျ)ခြှမျh(ငျ) - ကုတငျ တဈလုံး
ယိပါးယီဇဈz - ကုလားထိုငျ တဈလုံး
ယိကြီးhကှဇေ့ဈz - ဘီရို တဈလုံး
ယိကြီးhရှမျး(ငျ)ဇဈz - သတ်ေတာ တဈလုံး
ယိတငျ(ငျ)မောကျဇဈz - ဦးထုပျ တဈလုံး
ယိတငျ(ငျ)ဝဲငျဇဈz - ခွငျထောငျ တဈလုံး
ယီကဲာ့ကြဲငျhထို - ခေါငျးအုံး တဈလုံး
ယီကဲာ့ပေါကျကြဲငျh - ဖကျလုံး တဈလုံး
ယီကဲာ့ဖငျြး(ငျ)ကျော - ပနျးသီး တဈလုံး
ယီကဲာ့ရှီးကှား - ဖရဲသီး တဈလုံး
ယိထြောငျရှမျး(ငျ)ကြောငျး - ငှကျပြောသီး တဈလုံး
ယိထြောငျးဟှမျ(ငျ)ကှား - သခှားသီး တဈလုံး
ယီကဲာ့ပေါငျးဇဈz - ပေါကျစီ တဈလုံး
ယီလိကြီးတနျ့ - ကွကျဥ တဈလုံး
ယီလိယောကျဝမျ - ဆေးလုံး တဈလုံး
ယီဇော့zရှနျးh - တောငျ တဈလုံး
ယီဇော့zလို - တိုကျ တဈလုံး
ယီကဲာ့ကြား - အိမျ တဈလုံး
ယိခဲယျးရှငျး(ငျ) - ကွယျ တဈလုံး
ယိခဲယျးဇှမျ့zရှီh - စိနျ တဈလုံး
ယိခဲယျးထနျး(ငျ)ကျော - သကွားလုံး တဈလုံး
ယီခှိုကျရှိုးhပွောငျ - နာရီ တဈလုံး
ယီခှိုကျရှီးhထို - ကြောကျခဲ တဈလုံး
ယိထိုငျရှိုးhယငျးကြီး - ရဒေီယို တဈလုံး
ယိထိုငျတနျြ့နောငျ - ကှနျပြူတာ တဈလုံး
ယိထိုငျတနျြ့ရှဈhကြီး - တီဗီ တဈလုံး
ယီပုရှိုhကြီး - ဟနျးဖုနျး တဈလုံး
ယီကြာ့ကြီးခြိ - စကျ တဈလုံး
ယီကဲာ့ကော - အိုး တဈလုံး
ယိကြီးhခြာhပေး - လကျဘကျရညျပနျးကနျလုံး တဈလုံး
ယိပါခြားhဟူ - လကျဘကျရညျကရား တဈလုံး
ယိကြီးhဝမျ - ပနျးကနျလုံး တဈလုံး
ယီကဲာ့ပေါ - သပိတျ တဈလုံး
ယိကြီးhဖငျြ(ငျ)ဇဈz - ပုလငျး တဈလုံး
ယိကြီးhယနျကငျြး(ငျ) - မကျြလုံး တဈလုံး
ယိကနျြတဲငျး(ငျ) - မီးလုံး တဈလုံး
ယိကယျြတနျြ့ခြီh - ဓာတျခဲ တဈလုံး
ယီကဲာ့တိုကျဇဈz - အိတျ တဈလုံး
ယီကဲာ့ပပေ့ေါငျး - ကြောပိုးအိတျ တဈလုံး
ယီကဲာ့လျောစီး - မူလီ တဈလုံး
ယီလိခို့ဇဈz - ကွယျသီး တဈလုံး
ယိမေးဟဲယျတနျ့ - နြူကလိယားဗုံး တဈလုံး
oppo နဲ့ vivo ကို တရုတ်လို ဘယ်လိုခေါ်သလဲ။
1:23 AM C-Word , Chinese
အရည်အသွေး ကောင်းမွန်တဲ့ ဖုန်းအမျိုးအစားတွေထဲမှာ oppo နဲ့ vivo တို့လည်း ပါဝင်ပါတယ်။
ဒီဖုန်းအမျိုးအစားတွေရဲ့ နာမည်ကို ကျွန်တော်တို့အားလုံးက သူ့တံဆိပ်ထဲကအတိုင်း oppo သို့မဟုတ် vivo လို့ပဲ ခေါ်ဝေါ်ကြပါတယ်။
တကယ်လို့ တရုတ်လိုပဲ ခေါ်ချင်တယ်၊ တရုတ်စာလုံးနဲ့ပဲ ရေးချင်ရင်တော့ vivo ကို 维沃 Wéi wò လို့ခေါ်ပါတယ်။
vivo ကုမ္ပဏီနာမည်ကို 维沃移动通用有限公司
Wéiwò yídòng tōngyòng yǒuxiàn gōngsī လို့ ခေါ်ပါတယ်။
၁၉၉၅ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၈ ရက်နေ့မှာ 广东步步高电子工业有限公司 ကို 东莞 မြို့မှာ တည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။ 步步高 ရဲ့ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ BBK လို့ မှတ်ပုံတင်ထားပါတယ်။ vivo ဟာ 步步高集团 Group ရဲ့ ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်လည်း တော်တော်များများက vivo ကို 步步高 လို့လည်း ခေါ်ကြတာပါ။
步步高集团 Group ဟာ ဖုန်းတွေအပြင် 学生电脑、语言复读机、电子词典、掌上电脑、外语随身听、MP3数码随身听 စတာတွေကိုလည်း အဓိကထုတ်လုပ်ပါတယ်။
oppo ကိုတော့ 欧珀 ōu pò လို့ခေါ်ပါတယ်။
Guǎngdōng ōupò diànzǐ gōngyè yǒuxiàn gōngsī လို့ ခေါ်ပါတယ်။
oppo နဲ့ vivo ကို တရုတျလို ဘယျလိုချေါသလဲ။
အရညျအသှေး ကောငျးမှနျတဲ့ ဖုနျးအမြိုးအစားတှထေဲမှာ oppo နဲ့ vivo တို့လညျး ပါဝငျပါတယျ။
ဒီဖုနျးအမြိုးအစားတှရေဲ့ နာမညျကို ကြှနျတျောတို့အားလုံးက သူ့တံဆိပျထဲကအတိုငျး oppo သို့မဟုတျ vivo လို့ပဲ ချေါဝျေါကွပါတယျ။
တကယျလို့ တရုတျလိုပဲ ချေါခငျြတယျ၊ တရုတျစာလုံးနဲ့ပဲ ရေးခငျြရငျတော့ vivo ကို 维沃 Wéi wò လို့ချေါပါတယျ။
vivo ကုမ်ပဏီနာမညျကို 维沃移动通用有限公司
Wéiwò yídòng tōngyòng yǒuxiàn gōngsī လို့ ချေါပါတယျ။
၁၉၉၅ ခုနှဈ၊ စကျတငျဘာလ ၁၈ ရကျနမှေ့ာ 广东步步高电子工业有限公司 ကို 东莞 မွို့မှာ တညျထောငျခဲ့ပါတယျ။ 步步高 ရဲ့ ကုနျအမှတျတံဆိပျကို အင်ျဂလိပျဘာသာနဲ့ BBK လို့ မှတျပုံတငျထားပါတယျ။ vivo ဟာ 步步高集团 Group ရဲ့ ကုမ်ပဏီတဈခုဖွဈပါတယျ။
ဒါကွောငျ့လညျး တျောတျောမြားမြားက vivo ကို 步步高 လို့လညျး ချေါကွတာပါ။
步步高集团 Group ဟာ ဖုနျးတှအေပွငျ 学生电脑、语言复读机、电子词典、掌上电脑、外语随身听、MP3数码随身听 စတာတှကေိုလညျး အဓိကထုတျလုပျပါတယျ။
oppo ကိုတော့ 欧珀 ōu pò လို့ချေါပါတယျ။
Guǎngdōng ōupò diànzǐ gōngyè yǒuxiàn gōngsī လို့ ချေါပါတယျ။
ကွေ့တီယိုကို တရုတ်လို ဘယ်လိုခေါ်သလဲ။
8:27 PM C-Word , Chinese
ကွေ့တယိုက လူကြိုက်များတဲ့ ထိုင်းအစားအစာတစ်မျိုးပါ။
粿条 kē tiáo
ကွေ့တီယို - ခဲယ်းထျောင်
拌粿条 bàn kē tiáo
ကွေ့တီယိုသုပ် - ပန့်ခဲယ်းထျောင်
炒粿条 chǎo kē tiáo
ကွေ့တီယိုကြော် - ချောင်hခဲယ်းထျောင်
粿条汤 kē tiáo tāng
ကွေ့တီယို(အရည်) - ခဲယ်းထျောင်ထန်း(င်)
Nǐ xǐhuan chī kē tiáo ma ?
မင်း ကွေ့တီယို စားရတာကြိုက်လား။
ကှတေီ့ယိုကို တရုတျလို ဘယျလိုချေါသလဲ။
ကှတေ့ယိုက လူကွိုကျမြားတဲ့ ထိုငျးအစားအစာတဈမြိုးပါ။
ကှတေီ့ယို - ခဲယျးထြောငျ
ကှတေီ့ယိုသုပျ - ပနျ့ခဲယျးထြောငျ
ကှတေီ့ယိုကွျော - ခြောငျhခဲယျးထြောငျ
ကှတေီ့ယို(အရညျ) - ခဲယျးထြောငျထနျး(ငျ)
မငျး ကှတေီ့ယို စားရတာကွိုကျလား။
8:22 PM C-Word , Chinese
ခေါင်းလျှော်ရည်ကို တရုတ်လို ဘယ်လိုခေါ်လဲ။ နေ့စဉ်သုံး မရှိမဖြစ် ပစ္စည်းတွေထဲမှာ ခေါင်းလျှော်ရည်လည်း ပါဝင်ပါတယ်။
洗发液 xǐ fà yè
ခေါင်းလျှော်ရည် ☞ ရှီဖာ့fယဲ့
洗发水 xǐ fà shuǐ
ခေါင်းလျှော်ရည် ☞ ရှီဖာ့fရွှေh
洗发露 xǐ fà lù
ခေါင်းလျှော်ရည် ☞ ရှီဖာ့fလု
洗发剂 xǐ fà jì
ခေါင်းလျှော်ရည် ☞ ရှီဖာ့fကျိ
洗发精 xǐ fà jīng
ခေါင်းလျှော်ရည် ☞ ရှီဖာ့fကျင်း(င်)
香波 xiāng bō
ခေါင်းလျှော်ရည် ☞ ရှန်း(င်)ပေါ
沐浴露 mù yù lù
ရေချိုးဆပ်ပြာရည် ☞ မုယွိလု
沐浴液 mù yù yè
ရေချိုးဆပ်ပြာရည် ☞ မုယွိယဲ့
婴儿洗发液 yīng ér xǐ fà yè
ကလေးသုံး ခေါင်းလျှော်ရည် ☞ ယင်း(င်)အဲယ်r ရှီဖာ့fယဲ့
နာမည်ကျော် ခေါင်းလျှော်ရည် Brand တွေကတော့ -
海飞丝 hǎi fēi sī
Head & Shoulders ☞ ဟိုင်ဖေးfစီး
潘婷 pān tíng
PANTENE ☞ ဖန်းထင်(င်)
清扬 qīng yáng
Clear ☞ ချင်း(င်)ယန်(င်)
夏士莲 xià shì lián
Hazeline ☞ ရှာ့ရှစ်hလျန်
Lux ☞ လိရှစ်h
飘柔 piāo róu
Rejoice ☞ ဖျောင်းရိုr
欧莱雅 ōu lái yǎ
L'Oreal ☞ အိုးလိုင်းယာ
沙宣 shā xuān
VS ☞ ရှားhရွှမ်း
ခေါငျးလြှျောရညျကို တရုတျလို ဘယျလိုချေါလဲ။ နစေ့ဉျသုံး မရှိမဖွဈ ပစ်စညျးတှထေဲမှာ ခေါငျးလြှျောရညျလညျး ပါဝငျပါတယျ။
ခေါငျးလြှျောရညျ ☞ ရှီဖာ့fယဲ့
ခေါငျးလြှျောရညျ ☞ ရှီဖာ့fရှေh
ခေါငျးလြှျောရညျ ☞ ရှီဖာ့fလု
ခေါငျးလြှျောရညျ ☞ ရှီဖာ့fကြိ
ခေါငျးလြှျောရညျ ☞ ရှီဖာ့fကငျြး(ငျ)
ခေါငျးလြှျောရညျ ☞ ရှနျး(ငျ)ပေါ
ရခြေိုးဆပျပွာရညျ ☞ မုယှိလု
ရခြေိုးဆပျပွာရညျ ☞ မုယှိယဲ့
ကလေးသုံး ခေါငျးလြှျောရညျ ☞ ယငျး(ငျ)အဲယျr ရှီဖာ့fယဲ့
နာမညျကြျော ခေါငျးလြှျောရညျ Brand တှကေတော့ -
Head & Shoulders ☞ ဟိုငျဖေးfစီး
PANTENE ☞ ဖနျးထငျ(ငျ)
Clear ☞ ခငျြး(ငျ)ယနျ(ငျ)
Hazeline ☞ ရှာ့ရှဈhလနျြ
Lux ☞ လိရှဈh
Rejoice ☞ ဖြောငျးရိုr
L'Oreal ☞ အိုးလိုငျးယာ
VS ☞ ရှားhရှမျး
4:12 AM C-Dialogue , Chinese
တခါတလေမှာ ချိန်းထားတဲ့အခါ နောက်ကျတာလေးတွေ ကြုံဖူးကြမှာပါ။ ဒါကတော့ ဆင်ခြေပေးနည်းတွေထဲက တစ်ခုပေါ့။
☞ Nǐ lái wǎn le! Diànyǐng yǐjīng kāishǐ le.
☞ နီလိုင်းဝမ်လဲာ့ တျန့်ယင်(င်) ယီကျင်း(င်)ခိုင်းရှီhလဲာ့
☞ မင်းလာတာ နောက်ကျနေပြီ။ ရုပ်ရှင် စပြနေပြီ။
☞ Méiyǒu a! Diànyǐng bú shì bā diǎn bàn kāishǐ ma?
☞ မေးယိုအား တျန့်ယင်(င်)ပူရှစ်h ပါးတျန်ပန့် ခိုင်းရှီhမား
☞ ဟုတ်လို့လား။ ရုပ်ရှင်က ရှစ်နာရီခွဲစမှာ မဟုတ်ဘူးလား။
☞ Shì a, xiànzài yǐjīng bā diǎn bàn le!
☞ ရှစ်hအား ရှန့်ဇိုက်z ယီကျင်း(င်) ပါးတျန်ပန့်လဲာ့
☞ ဟုတ်တယ်လေ၊ အခု ရှစ်နာရီခွဲနေပြီ။
☞ Wǒ de biǎo cái bā diǎn ya!
☞ ဝေါ်တဲ့ပြောင် ဆိုင်ပါးတျန်ယား
☞ ငါ့နာရီက ရှစ်နာရီပဲရှိသေးတယ်။
☞ Nǐ de biǎo màn le bàn ge xiǎoshí.
☞ နီတဲ့ပြောင် မန့်လဲာ့ ပန့်ကဲာ့ရှောင်ရှီh
☞ မင်းနာရီက နာရီဝက်နောက်ကျနေပြီ။
☞ Tiān na! Duì bù qǐ!
☞ ထျန်းနာ့ တွေ့ပုချီ
☞ အိုး။ ဆောရီးပါနော်။
☞ Suàn le! Wǒmen kuài jìn qù ba!
☞ စွမ့်လဲာ့ ဝေါ်မဲင် ခွိုက်ကျင့်ချွိပါ့
☞ ထားလိုက်ပါတော့။ ငါတို့ အမြန်ဝင်ကြပါစို့။
တခါတလမှော ခြိနျးထားတဲ့အခါ နောကျကတြာလေးတှေ ကွုံဖူးကွမှာပါ။ ဒါကတော့ ဆငျခွပေေးနညျးတှထေဲက တဈခုပေါ့။
☞ နီလိုငျးဝမျလဲာ့ တနျြ့ယငျ(ငျ) ယီကငျြး(ငျ)ခိုငျးရှီhလဲာ့
☞ မငျးလာတာ နောကျကနြပွေီ။ ရုပျရှငျ စပွနပွေီ။
☞ မေးယိုအား တနျြ့ယငျ(ငျ)ပူရှဈh ပါးတနျြပနျ့ ခိုငျးရှီhမား
☞ ဟုတျလို့လား။ ရုပျရှငျက ရှဈနာရီခှဲစမှာ မဟုတျဘူးလား။
☞ ရှဈhအား ရှနျ့ဇိုကျz ယီကငျြး(ငျ) ပါးတနျြပနျ့လဲာ့
☞ ဟုတျတယျလေ၊ အခု ရှဈနာရီခှဲနပွေီ။
☞ ဝျေါတဲ့ပွောငျ ဆိုငျပါးတနျြယား
☞ ငါ့နာရီက ရှဈနာရီပဲရှိသေးတယျ။
☞ နီတဲ့ပွောငျ မနျ့လဲာ့ ပနျ့ကဲာ့ရှောငျရှီh
☞ မငျးနာရီက နာရီဝကျနောကျကနြပွေီ။
☞ ထနျြးနာ့ တှပေု့ခြီ
☞ အိုး။ ဆောရီးပါနျော။
☞ စှမျ့လဲာ့ ဝျေါမဲငျ ခှိုကျကငျြ့ခြှိပါ့
☞ ထားလိုကျပါတော့။ ငါတို့ အမွနျဝငျကွပါစို့။